20 I-Rockest Indie Rock kunye ne-Alternative Concept I-Albhamu
I-Albhamu ze-20 eziphezulu
Iirekhodi elide elide alizange lihlose ukuba ngumsebenzi wodwa wobugcisa; Kwiintsuku zokuqala zomculo ezidumileyo ekuhambiseni iqoqo lezingqungquthela ezijikelezayo phakathi kwemisebenzi, nje iimveliso ezisetyenziselwa ukugcina izikhwepha endleleni. Kule minyaka yedijithali, ukunyuka kwe-MP3 kunye nokuhlaziywa kwe-albhamu yokuma yodwa kwenza ukuba phantse. Kodwa kwiminyaka yamuva ifumene ukunyuka kwabahlabeleli beengoma, bevukela ukulandelwa komntu omnye ngokubhala ngokupheleleyo, ukuqonda, izitatimende eziqhutywe ngokukodwa. Ungabiza ngexesha le-intanethi kwixesha legolide le-albhamu. Nantsi iminwe yemisebenzi yamva yakutshanje kunye namabhabhane abo abaluleke kakhulu.
Xa u-Antony Hegarty efika eNew York ekuqaleni kwe-'90s, uluntu lwama-gay lwaye lwahlaselwa yiGawulayo, kwaye nobusuku kwimivalo yama-gay yayivame ukuvuswa. Ukusika amazinyo njengebhola-balladeer, udlale iingoma ezibuhlungu ukwenza i-trannies ikhale, kwaye, malunga neminyaka elishumi ezayo, wayedumisa imbali yakhe kwaze kwaba yinto enhle kangangokuba yayingenabuhlungu. Ndiyinyoni Ngoku ikhupha eli hlabathi, kwaye iHegarty ibonakale ibe yintliziyo yendalo. Isibini sesibini uLP sanikezela isithwathwa seetendchsongs esichazela ngesiphambeko, ukuguqulwa, nokuthatha iphiko; i-motif ye-central motif isimboli somfazi-oba ngumfazi-njengentaka. Kwakuyimbali ekhohlakeleyo yokuhleka okumangalisayo kunye nokucaca ukucoca, kunye ne-Hegarty songbird warble isixhobo esipheleleyo sokudideka kwesini.
I-epic Canuck rockers i-Arcade Fire yayingenako ukufuna isifuba kwii-albhamu zazo zokuqala ezimbini, i- Funeral ka-2004 kunye ne- Neon Bible ye-2007, kodwa ngo-2010 I-Suburbs yathatha izinto ezinyathelo. Lapha, u-Win Butler wabhala (Grammy winning!) Ingoma yomjikelezo wengoma ehlala kwindawo apho yena-kwaye ke, isizukulwana sonke-sikhula, sijonge ubomi babantu abakhankanywe ngamanqatha abanjengobo banjengeendonga zentolongo. Kuphi, ekuNgcwatweni , iBeler wayeyinkwenkwe ephuphayo yokuvukela nokukhululwa, apha ubuyela kwi-suburban sprawl bonke abakhulileyo, abasayikuqinisekiswa kweengcamango zakhe ekujonganeni nabantu abadala kunye nempumelelo yezemali. Ngaloo ndlela, i-suburbia ayiyona indawo yokubalekela kuyo, kodwa buyela emuva, umjikelezo wobomi obunikwe njengento ecinezelayo ye-cul-de-sac.
I-Red Headed Stranger ayiyona nje i-albhamu ye-albhamu, kodwa i-albhamu yesalathisi malunga ne-albhamu yesalathisi. Apha, u-Geraldine Fibber / u-Evangelista inkokheli uColla Bozulich wabuyela uWillie Nelson ka-1975 welizwe eliqhelekileyo eliqhelekileyo. Xa kulindeleke ukuba uBolilich acinge ngokucacileyo umbhalo, uhlala ehlala ecaleni lomthombo wakhe. Oku kwenza ukutshatyalaliswa okuthakazelisayo phakathi kwezwi lakhe lokugcoba kunye nokuthambekela kwendalo ekukhuseleni, kunye neendlela zokuqala ezihamba phambili, ezihamba phambili; Izinto ezikhulayo zixakeke ngakumbi xa kufakwa isalathisi-shinjethi isabelo kwizantlandlolo. UBolilich waze wambamba uNelson njengendwendwe yokuncedisa i-vocalist, engeza ezinye izitha zokubamba nokuqhafaza (ngaba uNelson uyakhokhela ngokufanelekileyo umvuzo?) Kwisethi.
AbaDisemba babenze iirekhodi eziqhutywe phambili ngaphambili-ngo-2005 EP The Tain yayingumgca omnye weminiselo engama-18 esekelwe kwi-epicemic Irish epic; 2006 LP Umfazi we-Crane wayephefumlelwe ngokugqithisileyo ngamabali aseJapane- kodwa iingozi zeThando zazingumsebenzi we-rock fera. Ingoma engu-17, umculo omude weqonga eliqhelekileyo, i-albhamu yesihlanu yebhanki ihlawula ingxaki yenkwenkwezi egama linguMargaret, abaphathi bayo abaninzi, iNkosikazi ye-Woodland kunye neentlobo ezahlukeneyo eziphucukileyo. Umculi weNgoma uColin Meloy usebenzisa isigama sakhe se-Victoriana ngobuqili, ezi Zingozi zoLuthando kubandakanya umlingo omnyama, igazi, i-infanticide, kunye nezigwili ezinobungozi. AbaDisemba bathatha le ngcamango-i-albhamu ingongoma eqhubekayo, nayo, ukudlala yonke iLP ihlala ngokulandelelana.
Abaprofeti abangcolileyo babeza kwenza i-albhamu yegama elidumileyo kunoko-ekuqhubekeni kwabo ngo-2007 okuKhuphuka phezulu , okwenza kwakhona i-Black Flag idibene ngokupheleleyo 'kwimemori'; Ngo-2010 iBjörk ibambisana noMnumzane Wittenberg Orca , iindibano zeengoma malunga nomkhombe whale - kodwa akukho nto yayibonakala yinyani, ihlazo, i-kooky njenge -Atty Address . Lapha, uDave Longstreth uthumela iqhawe elibizwa ngokuthi 'uDon Henley' ekuhambeni kokomoya ukuya entlango, kunye ne-peyote eyenza ukuqonda kwakhe kumoya welizwe. I-LP ngumzekeliso olingana noMbuso waseMelika kunye noMbuso we-Aztec, i-chain-store storeline yeempawu eziphambili ze-environmental sprawl kunye nokutshatyalaliswa kwemvelo. Ukuba unayo amanqaku, unokulandela ngokufanelekileyo, ngaphandle koko uhambo olude, olusendle, olungaqhelekanga, ngokwenene.
Ukuhlawulwa ngokuthatha i- Soft Bulletin ye-Soft Bulletin ngo-1999, i- Soft Bulletin ehamba ngendlela, i-psych-pop oddballs i-Lips Flaming yenza isigqibo somlingo sokuguqula imiphefumlo yabo kwimibhiyozo ebomini yobomi eyayivuma ukungavumeleki kokufa; Iimvakalelo ziphila kwingoma yabo esandul 'ingaba "Ngaba uyazi?" Xa umhlobo osemtsha waseJapan we-band wafa, uWayne Coyne wakhawula lo mqondo kwiingcamango-i-albhamu; apho i-super-hero-esque Yoshimi (ebizwa ngokuba ngumculi weBoredoms u-Yoshimi P-We), alwa nohlanga olubi lweeRobot Robots, iimpawu ezibonakalayo zezifo. Sekunjalo, ibali alisoze liba ngongoma, kwaye akukho siphelo esinokuzonwabisa. Apha, ukufa kwabo i-heroine yinto eyenziwe, kodwa uqhubeka elwa, emva kokuvuya ngokuphila.
Ukuza kummandla we-militia wase-United States we-hardcore wama-'80s, kwakushukumisayo ukunyuka kukaHüsker Dü ukuba abhalile i-albhamu ephindwe kabili. Nangona benza i- Zen Arcade ye- 1984 ephawulekayo nge-DIY emoyeni-ingoma engama-23 eyabhalwa yabhalwa kwaye ixutywe kwiindawo ezingama-85 iiyure-abhaliweyo Grant Grant kunye noBob Mold badinga ukusebenzisana neqhinga lokudlala, ephindwe kabini njengebali eliphumayo. Ingqungquthela yalo ilandela idolophana elincinane elikude lizama ukuzitholela (kwimikhosi, kwinkolo, ngokwesini, kwizidakamizwa) ngokunyuka kokuphelelwa lithemba, kuphela kwi-hokey TV isiqwenga sokuqhaqhafaza kwaye siqonda ukuba yonke iphupha . Umbuzo osondeleyo ufana nekhefu lokufanisa: uzama ukwenza ikusasa lakho, okanye wamkele ngenyameko umyalelo wakho owamiselweyo?
Ubunzima bukaJenny Wilson! (2009)
Ubunzima beJenny Wilson! '. IMedal Gold
I-albhamu yokuqala yeJenny Wilson, ngo-2005 ngoLuthando noLutsha , ngo-2005, yayiyiqela leengoma malunga nokukhula kwasekuqaleni, kodwa, ngexesha lokuba uWilson ubhale incwadi yakhe yesibini, kakhulu wayesitshintshile ebomini bakhe ukuba abuke emva kwimihla yakhe yokwenza. UWilson wayengumama, kabini, kwaye ukufika kwabantwana ebomini bakhe, kwakucacile ukuba, wayichitha ulwazi lwakhe olukhuselekileyo malunga nokuba ngubani na kwaye ufanelekile kwihlabathi. UWilson wasukuma ngokukhawuleza, ebhala i-albhamu engummangaliso ngokuphathelele ubufazi kunye nobunina, ukuhlanjululwa kwemimoya kunye neengxaki eziqhubekayo zomama njengo-martyr. Ngokukhawuleza, wahlolisisa le nto ngomzabalazo wokulwa; zibuza ukuba kutheni uluntu lenza amaqhawe emfazwe, kodwa lihlambalaza oomama balo; kuvuza abo bathabatha ubomi, kodwa kungekhona abo bawenzayo.
UJordaan Mason kunye neMahmusic yeHarry 'Amalungu oSahlulo soTshabhane Ndiyifake intloko yam' (2009)
UJordaan Mason kunye neMahmusic ye-Horse 'Lawyers Counters I Shaved Head of'. Screech Owl
Nabani na othabatha umculi we-Henry Darger wephepha le-15,000, iphephandaba elithi "inoveli" epapashwe ngokulandelelanayo KwiiNkcazo ze-Unreal njengokuba ugqozi lwazo aluziwayo kwiinjongo. I-albhamu yokuqala engama-61 ye-albhamu ingabonakalisa ukuthobeka xa kuthelekiswa neminyaka engamashumi ayisithupha engamazwi angabonakaliyo, kodwa inobungakanani bayo. Ihlawulwe kakhulu kwi-Hotel ye-Milk ye-neutral, iingoma ezifana neengoma zomculo ezigubhayo kwiimpondo ze-band-band, kunye nokulila kweMason okugulisa iingoma eziphazamisayo kuzo zonke. Apha, isibini esingaqaliyo sinobugqwetha ngendlela yabo ebomini kunye; ngobudlelwane, umtshato, ukuzalwa, izifo kunye nokufa. Nangona i-grotesquerie engummangaliso, isicatshulwa sikaMason ngumzekeliso wezopolitiko kunye nezopolitiko, kwakhona, ukuhlola indlela abafana besini bahamba ngayo "umlando wendabuko wobudlelwane bobulili obufanayo."
I-Kinks 'Ngaba I-Village Preservation Society' (1968)
I-Kinks 'Ngaba uMbutho woLondolozo oluGcini weGreen'. Pye
Ngokufika kwe -Who Sell Out kunye ne-Pretty Things ' SF Sorrow , ukuhlasela kweNgesi kwazisa i-albhamu yegama kwi rock'n'roll. Apho abanye benza iindawo eziphakamileyo, izitatimende ezingaphezulu komsebenzi, akukho mntu wabhaliweyo obhaliweyo njengengqiqo kwaye enamandla njengoko i-Kinks 'uRay Davies. Umbutho woLondolozo oluGcini waseMzaneni unqamle umtya we-albhamu yesigcaziso kwisitayela, kunye neqoqo lentsapho engenabantwana, i-jangling, i-classic pop edibeneyo kumxholo oyedwa. Ipeyinisa imifanekiso yendawo yaseNgilani yasemaphandleni kunye nabemi bayo abemi, kodwa isilingo sokutshintsha amaxesha, ngokuziqhenkcela iingoma ezinjenge "Ixesha lokugqibela leetreni ezixhasiweyo". Lapha, uDavies ubhala isilumko esisodwa sokuba izithethe zesiNgesi zilahleke ngokukhawuleza ukuba zikhulu, inkcubeko yabathengi.
UStephin Merritt wayengakaze azikhethele kwilizwe le-indie, kodwa uthanda lwakhe -'ama-30s ',' amazwe angama-60, 'i-80s synth-pop- yayingaphandle kwexesha kwi-90's gringed-up' apho yaphela khona. Ukukhathala kokukhwela phantsi komhlaba, uMerritt-umthandi we-Irving Berlin kunye noCole Porter- wayefuna ukuthatha isenzo sakhe kwi-Broadway. Ngoko wenyuka ngesicwangciso sokubhala iingoma ezili-100 kunoma yimuphi na zonke iintlobo, njengeCV yokuqeshisa abavelisi. Ekugqibeleni, wanciphisa ukuya kwi-69 eselungileyo; kwaye wawafaka kwi-albhamu yesithathu eyayidlala njengama-tap-mix mixte. Ukuba u- 69 Iingoma zoLuthando lwama- Broadway okanye zikhukula, uMerritt wehlulekile. Ukuba yakhe ingcamango enkulu yayiyikhadi lokubiza ukunyaniseka okukhulu, nangona kunjalo, kwaba yimpumelelo ephawulekayo: ngokukhawuleza ukuba yi-albhamu ethandwa kakhulu kwi-Magnetic Fields.
Ephakanyisiwe kwiSiqithi saseFidalgo esikude kufuphi nomda waseCanada, uPhil Elverum wakhulela emthunzini weMat. I-Erie ehamba ngeenyawo ezili-1200. Kuye, kwakuyiNtaba ye-Eerie , intaba eyoyikisayo, eyoyikrakra eyayisisigxina sokukhumbuza isityholo esingaqhelekanga ebusweni bendalo. Intaba ye-Elverum ye-Eerie yi-opera yama-indie malunga nale nto; Ukuthumela i-protagonist yayo kwi-Odyssey ukuya entabeni yeengingqi, apho ehlangene nobunzima ngokwayo: umhlaba, ilanga, kunye nomhlaba wonke kubonakala njengezilwanyana eziphilayo. Umculo, iinqanaba ze-Elverum ezi zigaba ezintlanu ezide, ezakhiwe kwiTransko, ziphazamise iinqwelo, zize zihlanjwe iindlovu, zifakwe izandi zentlango-iifet-iifowuni-zibizo, iinqhwala, umoya kunye nemvula-njengesikhumbuzo sokuqina kwemvelo.
Kwi-studio yakhe yokuqala ye-studio ye-LP, i-Mountain Goats, umculi wengoma uJohn Darnielle wathatha inxaxheba yakhe yokuqala yexesha elide. Ukulungiswa kweengoma kwakuneengoma ezide zibhalwa ngabalinganiswa bobuxoki, kodwa iirekhodi zakhe zangaphambili (ezininzi I-Tallahassee ithatha i-albhamu-njenge-inoveli, ingxelo eqhubekayo ichaza umtshato ongaphumeleli kwifom yee-pop. Indoda / umfazi wethu uhambela edolophini ebizwa ngokuba yiFloridian, kwaye indlu yabo ihamba ilayishiwe ngeempawu ezinamandla: iziseko zendawo, i-yard egciniweyo, izitereji ezivaliweyo, "izitebhisi ezipholile zokhuni," "zixakeke." Njengoko isibini esinesibini esonwabileyo sidibanisa ukudakwa, ukuphelelwa lithemba, kunye nomdlalo, isohlo likaDarnielle ngokubhekiselele kwingxelo elicacileyo, kwaye ibali elichazwe ngokucacileyo alizange likhuphe.
I-Neon Neon 'Isitayela esingenanto' (2008)
I-Neon Neon 'Isitayela esingenanto'. Lex
Isitala esingenasici sincinci i-rock opera, i-synth-opera eninzi. Apha, u-beatmaker uBomom Bip kunye neFighter Furry Izidalwa zezilwanyana uGruff Rhys azikho nje kuphela kwi-band-name, kodwa yenza i-shrine ye-80s njenge-capsule yexesha. I-tone ye-LP ye-post-disco ithetha ngomxholo wayo: ubomi kunye namaxesha kaJohn DeLorean, uvulindlela wezemidlalo-upi Ukuqala kweColor DeLorean ngokuthobeka, ukunyuka kwe-vertiginous, idumela lomdlali, i-pseudo-hip-hop-cred, kunye nokupheliswa komonakalo we-cocaine, Isitayela esingenasici sinokuningi kunye no- Scarface , kwaye, ngokuphuma kwayo "Neon Theme," ngamanye amaxesha unjengeNeon Neon babhala amanqaku kwi-biopic engacatshangwanga, engapheliyo.
Ibinzana elithi 'i-albhamu yengqiqo' ibonisa uhlobo lwenjongo yokufundiswa, kodwa uYeff Mangum obugcisa buvakalelwa kakhulu njengegazi. I-suite yayo yokudibanisa yeengoma yayingeyena msebenzi wokubhaliweyo, kodwa ubushushu obunzima; Iingoma zikaMangum ekuguquleleni iimbozi ezinobungozi, zibe ziingoma. Emva kokufunda i-Anne Frank's Diary yeNtombazana encinci , uMangum waxhatshazwa nguye, kwaye ebusuku wayephupha ukusebenzisa ixesha-mshini ukuze abuyele aze amsindise. Wabeka yonke le nto-kwimifanekiso yokwesabisa kunye nefuthe elivuthayo-kumxube we-pop-up-out kunye ne-full-blooded-band-bomp, kunye nomxholo wayo ubambisana kunye nokuhlola kookiest. Ngokuchasene nazo zonke iingxaki, kubonakala kungumsebenzi wokuphelela, kwi-Airplane phezu koLwandle ehlonishwa njengenye yee-albhamu ezinkulu kakhulu.
I-Montreal 'I-Gay Parade' (1999)
I-Montreal 'I-Gay Parade'. Ibha / Akukho
Uphefumlelwe yi -Village Village Preservation Society kunye neSgt. I-Pepper's Lonely Hearts Club Band , Inkokheli yaseMontreal uKevin Barnes yambamba le ngqungquthela enemibala enemibala efanelekileyo. Apha, ibhendi isebenzisa iindlela zayo ezinjengezixhobo eziphathekayo, ukuthabatha kunye nokukhwabanisa ukugqithisa; le ndlela ixhaswa yi -Gay Parade elayishiwe, isihloko esithintekayo kabini. Ingoma engama-16 isetyenzisiwe kwincwadi yebali-encinci idolophini ehlala kuyo yonke i-kooky caricatures kunye nezizathu ezingenangqondo. I-shtick yonke-kunye ne-albhamu ephezulu kwi-"Coco" yaseNickee kunye noMthi ongabonakaliyo, imizuzu emihlanu yeengqungquthela apho idolophana yonke eyingqiqo-kwaye malunga nama-20 amalungu eNkono-6 ahlangene- ajoyine i-chorus.
UOwen Pallett 'Heartland' (2010)
Emva kokugqibela kweFinale Fantasy LP, ngo-2006 i- Poos Clouds , yayinguDungeons & Dragons i -albhamu yengqiqo, kwakungekho ngathi ngathi u-Owen Pallett angenza umsebenzi ophezulu, unomdla. Yabona, kunye ne- Heartland , yinto ephambili yeso sihlalo. Xa uPallett edlala unkulunkulu onobunzima bemihlaba, sihlangana nabantu abathintekayo (Cockatrice, Blue Imelda, No-Face) kunye neqhawe le-tale, uLi Lewis, umlimi ohluphekileyo lowo umculi-mculo / uThixo ubiza ukuba aholele ukuvukela kwabantu. Xa izinto zihamba ngokukhawuleza, uLias ulahlekelwa lukholo lwakhe ("Ndiyithungela ... ukungabikho nkcenkceshela kwaBathengisi beendaba") kwaye ibulale 'Owen' kwisenzo sokubonakalisa ubuciko obuqhekeza kulo mculi. Ingqungquthela ebalulekileyo yokuqonda, njengokuthi "iDuck Amuck" idluliselwe kunye ne-Czech orchestra kunye namalungu e-Arcade Fire kunye namazwi amangalisayo.
I-Shirley & Dolly Collins 'Iimpawu ze-Eden' (1969)
I-Shirley & Dolly Collins 'Iimpawu ze-Eden'. Ukuvunwa
Abaninzi banokungazi kakuhle ukuzinikela kukaShirley noDolly Collins kwizixhobo zendabuko kunye neengqungquthela njengendlela ye-Romanticism yama-rose, ephazamisa kwixesha elidlulileyo laseNgilani. Kodwa, kunoko, uShirley, umgcini ohambahambayo we-folksong, ungumfundi ozinikeleyo wembali owaziyo ukuba abo abangafundanga kuyo baya kulahlwa ukuyiphinda. Ukuxhatshazwa ekubandakanyekeni eBrithani eVietnam, nanko uthatha umthwalo wenkcubeko yemveli-eyabhalwa kwiingxabano ezibizwa ngokuthi i-crumhorn, i-sackbut, i-sordun, i-rebec, kunye ne-rackett- ephezulu kwiintlupheko zengxabano; iingoma ezihamba ngegazi lamadoda amancinci athunyelwe ekufeni kunye neinyembezi zeentsimbi ezishiya ngasemva. Icandelo layo elipheleleyo le-One ngenye yemizuzu engama-28 ehamba phambili yeengcamango ze-albhamu ngokuphelela; kwaye yonke into isondele.
Ukunikezelwa kwayo yonke i- Sufjan Stevens 'LPs yimbono-albhamu ngenye indlela, kwakunzima ukuhlala kwenye. Kodwa uMichigan ubonakala njengengoma-albhamu eyathatha uStevens kwihlabathi, engakhankanyi ukukhankanywa njengowokuqala kwinqaku elicwangcisiweyo ye-50 (!) Ingcamango-albhamu. I-super-ambitious multi-instrumentalist ekuqaleni yayihlose ukubhala irekhodi kuwo wonke urhulumente kwimanyano; ukumba ngembali yombuso nokuyibeka kwifom-song songistist. Sekunjalo, iMichigan yayingasondelene nayo njengophando njengolandela, i- Illinois ; inyaniso yokuba uStevens waqala kunye nekhaya lakhe-ndoda ayizange ibe yintlekele. Apha, udonsa iimbali zabantu aze azixube ngeendlela ezibonakalayo zobuqaqawuli bezoqoqosho kunye nokonakala kwezoqoqosho, okwenzela iphothiyoli esichukumisayo kwi-Midwestern state.
Abaninzi babembiza iB Bush / Cheney / Rumself America 'dystopian' -imfazwe yeoli, uMthetho we-Patriot, i-gulag ezukileyo e-Guantánamo-kuncinci imbali ebhaliweyo eyayibuyiselwa kwi-dystopian sci-fials. I-Lo-fi yasePortland iipunks Izidumbu ziye zafikelela kulo msebenzi, nangona kunjalo. I-LP yabo yesithathu, IQumrhu, iGazi, Umshini , umzekeliso wexesha elifanelekileyo wexesha elizeleyo elilandelelanayo libonisa isibini sabathandi abancinci abazama ukubalekela kwi-Orwellian nightmare ye-evangelical, i-Amitricity. Ngengqiqo ecacileyo, umbhali wengoma uHutch Harris uyayibhalela iBhayibhile, ekhupha iintetho zeTestamente endala zokutshutshiswa, ukulahlwa, kunye nenkululeko njengoko amaqhawe e-adventure ekhangelelwa ukuba akhulule 'amaMerika' ekhululekile kwiidyokhwe zoxinzelelo.
Uhlu lokudlala lomculo lwaseKenya
Izwe eliPhambili leMiboniso yeArab
Iingoma ze-Anti-War Protest Songs
Iingoma ezi-10 eziphezulu zelizwe Ngeetrekta
I-Kix: '80s East Coast Hair Metal Band
Iintlobo ezili-10 ze-Grammy Award Performance of All Time
Iipopayi ezili-10 eziphambili ze-Pop Pop January 7, 2014
Iirekhodi ezingama-20 eziphambili zeKrismesi
50 Iingoma eziphambili zeRip zika-2015
Phezulu uMike + Iingoma zoMatshini zee-80s
I-Atlantic Spotted Dolphin
100 amagama aguqukayo
Yintoni Ulwaphulo-mthetho lokuKhutshwa kweNtshontsho?
Iingxoxo kunye neZoos
Vuka & Vala
I-Wolf Folklore kunye neLendlo
Indlela yokusebenzisa iibhokisi ze-Checkbox kwi-DBGrid
Amazwe aseMntla Merika
Intshayelelo kwiVector Mathematics
Iintsika ze-Rolling Stones ezingaphezulu ezi-20
Iinkqubo zoKhuselo lwezilwanyana
'Xa,' 'Lorsque,' 'Xa de,' kunye ne 'Pendant': Yintoni eyahlukileyo?
Imbali yeNapoleonic Code / Code Napoleon
Ukusebenza Inkcazo kwiKhemistry
UCharles Stewart Parnell